Bit By Bit - Introduction - 1.1 An ingi achasvibiswa
Muzhizha ra2009, mobile phones vakanga achirira zvose mhiri Rwanda. Kuwedzera mamiriyoni kunoda pakati mhuri, shamwari, uye shamwari mabhizimisi, vanenge 1,000 vokuRwanda vakagamuchira kudanwa kubva Joshua Blumenstock nevamwe vake. Vaongorori vakanga kudzidza pfuma uye urombo pakuitisa ongororo yevanhu vakanga randomly vakatora kubva Database mamiriyoni 1,5 vatengi kubva Rwanda guru runharembozha Provider. Blumenstock uye nevamwe akabvunza vechikamu kana vaida kubatanidzwa mune imwe ongororo yakaitwa, akatsanangura yezvakaita kutsvakurudza kwavari, uye ipapo vakakumbira mibvunzo yakatevedzana pamusoro wavo wevanotungamirira, magariro, uye zvoupfumi maitiro.
Ini ndakati zvose kusvikira zvino anoita ruzha urwu rwakaita zvetsika nemagariro sayenzi ongororo. Asi, chii chinozoitika haisi tsika, kanenge kuchigere. Vakashandisa ongororo Data kurovedza muchina pakudzidza muenzaniso kufembera upfumi munhu kubva yavo kudanwa data, uye ipapo vaishandisa muenzaniso uyu kufungidzira upfumi zvose vatengi mamiriyoni 1,5. Zvadaro, zvinofungidzirwa nzvimbo dzokugara ose vatengi mamiriyoni 1,5 nokushandisa mashoko tsaukana midzi kudaidzwa matanda. Kuisa inofungidzirwa mbiri idzi pamwe chete-kwacho upfumi uye zvinofungidzirwa nzvimbo dzokugara-Blumenstock uye nevamwe vaigona kubereka mukuru-chisarudzo nokufungidzira ari nzvimbo kugovera upfumi mhiri Rwanda. Kunyanya, vaigona kubudisa zvinofungidzirwa upfumi nerimwe veRwanda 2,148 masero, ruduku administrative unit munyika.
Zvakanga zvisingaiti kuti hunotsigira kufungidzira izvi nokuti hapana munhu akamboradzikwamo kugadzirwa inofungidzirwa kuti vakadaro duku tsaukana nzvimbo muRwanda. Asi, kana Blumenstock uye nevamwe aggregated inofungidzirwa kwavo veRwanda maruwa 30, vakaona kuti vanofungidzira dzavo dzakanga dzakafanana nokufungidzira kubva wevanotungamirira uye Health Survey, mureza ongororo munyika dzichiri kusimukira goridhe. Kunyange zvazvo nzira idzi mbiri yakabereka inofungidzirwa saizvozvo iyi, kuswedera pedyo Blumenstock uye nevamwe oda ka10 nokukurumidza uye isingadhuri ka50 kupfuura zvetsika wevanotungamirira uye Health Surveys. Izvi zvinoshamisa nokukurumidza uchingodzikira mutengo inofungidzirwa pave mikana mitsva nokuti vanotsvakurudza, hurumende, uye makambani (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Kuwedzera kuva nzira itsva, kudzidza iri mhando yakaita Rorschach inkblot bvunzo; chii vanhu kuona kunobva dzavaigara. Masayendisiti akawanda evanhu ona mutsva nekuyera chishandiso inogona kushandiswa kuongorora dzidziso pamusoro zvoupfumi. Vazhinji Data masayendisiti kuona vatsva dambudziko akadzikama muchina pakudzidza. Vazhinji bhizimisi vanhu vanoona nzira chakasimba anokiyinura kukosha mune digitaalinen zvisaririra Data kuti havana vakatounganidzwa. Vazhinji zvakavanzika vanyatsowana ona chiyeuchidzo kutyisa kuti tiri kurarama munguva vakawanda nokuongororwa. Vazhinji Vavezi Gwaro ona nzira itsva zvigadzirwa zvemazuva ano zvinogona kubatsira nyika iri nani. Kutaura zvazviri, kuongorora izvi zvose zvinhu, uye kuti Ndokusaka hwindo kupinda remangwana mumagariro tsvakurudzo.